ဟောလိုးဝင်းညမှာ ဘဲအသစ်လေးနဲ့လန်းမယ့် နေခြည်ဦး - Cele Connections
ဟောလိုးဝင်းညမှာ ဘဲအသစ်လေးနဲ့လန်းမယ့် နေခြည်ဦး
အလှအပချစ်မြတ်နိုးသူ ပရိသတ်တွေအတွက် အလှအပဆိုင်ရာတွေကို လေ့လာချင်တဲ့အခါ နေခြည်ဦးကို သတိရကြမှာပါ။ သူမကတော့ Beauty Blogger တစ်ယောက်အဖြစ် လူသိများကျော်ကြားသလို အခုချိန်မှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများမှာ နာမည်ကြီးမင်းသားများနဲ့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုလတ်တလောရုံတင်ထားတဲ့ အခမ်းနားဆုံးမေတ္တာဇာတ်ကားမှာလည်း နိုင်ငံကျော်မင်းသားနေတိုးနဲ့အတူ လိုက်ဖက်ညီညီနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။ သူမရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်တွေကြောင့် အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတဲ့အမျှ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုလည်း နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
နေခြည်ဦးနဲ့ ပတ်သက်လို့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ သူမရဲ့အချစ်ရေးကလည်းတစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း သူမရဲ့အချစ်ရေးကတော့ အမြဲတစေကံခေတတ်တာမို့ ပရိသတ်တွေက စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပါ။ မကြာသေးခင်ကလည်း သူမဆီ ပန်းစည်းတွေနေ့စဉ်ရောက်ရောက်လာတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက အထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါသေးတယ်။ နေခြည်ဦးက သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်း “ဒီသရဲများညမှာတော့ နေခြည်ဦးတစ်ယောက် သစ္စာတရားအရမ်းကြီးမားတဲ့ ဘဲလေးတစ်ယောက် ရရှိသွားလေပြီ”…. လို့ မျှဝေခဲ့လို့ ပရိသတ်တွေကတော့ ထင်ကြေးအမျိုးမျိုးပေးနေကြပါတယ်။
နေခြည်ဦးရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေကတော့ သူမရဲ့ဘဲအသစ်လေး ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကို အရမ်းသိချင်နေကြပါပြီ။ Cele Connectionsပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း နေခြည်ဦးရဲ့ဘဲအသစ်လေးက ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းပေးကြပါဦးနော်။
ဟောလိုးဝငျးညမှာ ဘဲအသဈလေးနဲ့လနျးမယျ့ နခွေညျဦး
အလှအပခဈြမွတျနိုးသူ ပရိသတျတှအေတှကျ အလှအပဆိုငျရာတှကေို လလေ့ာခငျြတဲ့အခါ နခွေညျဦးကို သတိရကွမှာပါ။ သူမကတော့ Beauty Blogger တဈယောကျအဖွဈ လူသိမြားကြျောကွားသလို အခုခြိနျမှာလညျး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမြားမှာ နာမညျကွီးမငျးသားမြားနဲ့ တှဲဖကျသရုပျဆောငျနပွေီဖွဈပါတယျ။ အခုလတျတလောရုံတငျထားတဲ့ အခမျးနားဆုံးမတ်ေတာဇာတျကားမှာလညျး နိုငျငံကြျောမငျးသားနတေိုးနဲ့အတူ လိုကျဖကျညီညီနဲ့ သရုပျဆောငျထားပါသေးတယျ။ သူမရဲ့ ကွိုးစားအားထုတျတှကွေောငျ့ အောငျမွငျမှုတှရေရှိလာတဲ့အမြှ ဝဖေနျတိုကျခိုကျခံရမှုတှကေိုလညျး နစေ့ဉျကွုံတှနေ့ရေပါတယျ။
နခွေညျဦးနဲ့ ပတျသကျလို့ပရိသတျတှစေိတျဝငျစားကွတဲ့ အကွောငျးအရာတှထေဲမှာ သူမရဲ့အခဈြရေးကလညျးတဈခုအပါအဝငျဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ ပွညျ့စုံကွှယျဝတဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျဖွဈပမေယျ့လညျး သူမရဲ့အခဈြရေးကတော့ အမွဲတစကေံခတေတျတာမို့ ပရိသတျတှကေ စိတျမကောငျးဖွဈနကွေတာပါ။ မကွာသေးခငျကလညျး သူမဆီ ပနျးစညျးတှနေစေ့ဉျရောကျရောကျလာတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ အထူးစိတျဝငျစားနကွေပါသေးတယျ။ နခွေညျဦးက သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာလညျး “ဒီသရဲမြားညမှာတော့ နခွေညျဦးတဈယောကျ သစ်စာတရားအရမျးကွီးမားတဲ့ ဘဲလေးတဈယောကျ ရရှိသှားလပွေီ”…. လို့ မြှဝခေဲ့လို့ ပရိသတျတှကေတော့ ထငျကွေးအမြိုးမြိုးပေးနကွေပါတယျ။
နခွေညျဦးရဲ့အမာခံပရိသတျတှကေတော့ သူမရဲ့ဘဲအသဈလေး ဘယျသူဖွဈမလဲဆိုတာကို အရမျးသိခငျြနကွေပါပွီ။ Cele Connectionsပရိသတျကွီးအတှကျလညျး နခွေညျဦးရဲ့ဘဲအသဈလေးက ဘယျသူဖွဈမလဲဆိုတာကို ခနျ့မှနျးပေးကွပါဦးနျော။
” ချစ်သူအသစ်ရရှိသွားပြီလို့ မှတ်ချက်ပေးခံနေရတဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ”
Tik Tok ဆော့ပြီး ပဲများလွန်နေတဲ့ သမီးကြီးပေါ်ရှာကို ဆေးကြီးကြီးထိုးလိုက်တဲ့ စမိုင်းလ်
(၃၅)နှစ်အရွယ် သူမတောင် လိုက်လို့မမှီနိုင်တဲ့ အသက်(၅၃)နှစ် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ မိခင်ရဲ့ နုပျိုမှုကိုပြောပြလာတဲ့ အေးမြတ်သူ
” အကောင့်ကို ဟက်ကာ တိုက်ခိုက်ခံနေရမှုကြောင့် Deactivated လုပ်ကာ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ခင်ပိုးပန်းချီ”